Recent Interview Events आम जनताका हकहितका लागी सेवामुखी भएर अघि बढ्छु : नयाँ शक्ति नेपालका सदस्य मनोहरि किसोर श्रेष्ठ । नयाँ शक्ति नेपाल, मोरङ क्षेत्र नं ९ का क्षेत्रिय संयोजक तथा जिल्ला सदस्य हुन् मनोहरि दाहाल । गत चैत ११ गते एमाओवादी पार्टी परीत्याग गर्दै उनी नयाँ शक्ति प्रवेश गरेका हुन् । २०३६ सालदेखी विद्यार्थी राजनितीबाट आएका उनी मालेमा, नेपाली काग्रेस , एमाओवादी हुदै हाल पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिमा प्रवेश गरेका हुन् । एमाओवादीमा उनले क्षेत्रीय सदस्य, नगर कमिटी सचिवालय सदस्य हुदै गृह अर्थ नगर कमिटी ईन्र्चाच रहेर काम गरे । यसका अलवा विभिन्न सामाजिक कार्यसँगै संघसंस्थामा रहेर सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका उनी पार्टी परिवर्तन गरेसँगै स्थानिय मिडियामा केही समय अघि निकै चर्चामा आए । फेसबुक देखी लिएर अन्य सामाजिक संजालमा समेत उनको पार्टी परिवर्तनका विषयलाई लिएर अन्य राजनितीक दलका स्थानिय नेता तथा कार्यकताको गफको विषय बनेको थियो । पार्टी परिवर्तनसँगै चर्चामा आएका तिनै मोरङ जिल्ला सदस्य मनोहरि दाहालसँग गरेका कुराकानीका अंशहरु :नयाँ शक्तिमा तपाईलाई केले लोभ्यायो ?
लोभ्यायो र नयाँ शक्तिको सदस्य बनेको भन्ने महत्वपूर्ण विषय होइन । आर्थीक एजेन्डा, काम गर्ने शैली र आर्थीक बिकासका मोडल अनि नयाँ शक्तिमा युवा तथा वौद्धिक जमात अनि व्यापारीहरूको बाक्लो उपस्थीतीले गर्दा म लोभीए । नयाँ विचारधारा नेपालको आवश्यकता हो भन्ने पहिलेदेखि नै महशुस भएको थियो । अहिलेको राजनीतिक संस्कारबाट देशले निकास पाउँदैन, त्यसका लागि नयाँ राजनीतिक विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले मात्रै होइन कि पुराना राजनीतिक दलका स्थानिय नेता देखी लिएर शीर्षस्थ नेताहरु नै भन्नुहुन्छ । त्यो सन्दर्भमा म नयाँ शक्तिको सदस्य बनेको हो ।
तपाई एमाओवादीमा लागेर अवसर नपाएपछि नयाँ शक्तिमा लागेको भन्ने आरोप छ नि ?
म एमाओवादीमा अवसर खोजेर गएकै थिइँन । राजनीतिमार्फत स्थानिय विकास निर्माणको सुप्रिम लेभलमा पुगेर गतिलो नीतिहरु बनाएर नगरसँगै देशको विकासमा काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो धारणा थियो । मैले एमाओवादीमा रहदा धेरै अबसरहरु पाएकै हो । नगर सचिवालय सदस्य, गृह न्याय र अर्थ को फेक्सन ईन्चाजभएर काम गरीरहेको थिए । अझ म नयाँ शक्तिमा प्रवेश गर्ने समयमा त क्षेत्रीय सदस्य र क्षेत्रको गृह न्याय ईन्चाज थिए । अबसर नपाएको भन्ने गलत कुरा हो । नयाँ शक्ति आवश्यक छ भन्ने मलाईमात्र नभई धेरैलाई लागेको छ । देशको विकास गर्ने, डेलिभर गर्ने खालको शक्ति आवश्यक थियो ।
यस क्षेत्रमा नयाँ शक्तिको संगठनात्मक विस्तार कसरी हुन्छ ?
पछिल्ला केही समय यता हामी यस क्षेत्रको संगठन विस्तार गर्ने कार्यमा व्यस्त छौं । उर्लाबारी, मधुमल्ला, जाँते र टांडीमा संगठन बिस्तार कार्य तिव्र गतिमा भइरहेको छ । बाँकी रहेका अन्य गाविस तथा नगरपालीकाहरुमा पनि संगठन बिस्तार गरी कमिटी गठन गर्ने प्रक्रियामा छौं । सामाजिक सञ्जाल र टेलिफोनबाटै दूरदराजमा रहेका जनतालाई यो अभियानमा आवद्ध हुन आहृवान गरिनेछ । यसको संगठनात्मक विस्तार माथिबाट नभई तलबाट हुन्छ । टीका लगाएर, माला लगाएर पार्टी प्रवेश गर्ने भन्ने यहाँ हुँदैन ।
कस्ता व्यक्तिहरुको बढी सहभागीता रहन्छ यसमा ?
नयाँ शक्तिमा विशेषगरी बौद्धिक एजेन्डा भएका र देसका लागी केही गर्छु भन्ने सोच राख्ने तर अबसरबाट बन्चित भएकाहरुको बढि भन्दा बढि सहभागीता रहन्छ । विभिन्न विचार समूहका व्यक्तिहरु आवद्ध भएको नयाँ शक्ति खिचडीजस्तै देखिन्छ । अस्तित्व जोगाउन ठूलै चुनौतिको सामना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ?नयाँ शक्ति प्रवेश गर्नूभन्दा पहिले कसको विचार के भन्ने अर्थ रहदैन् । पार्टी प्रवेश पछि सबैको विचार एउटै हुनुपर्छ र हुन्छ पनि । समृद्धी, शुसाषन, स्वास्थ ,सीक्षा र स्वरोजगार सबैको लक्ष्य हो त्यसैले चनौती छैन् । त्यसैले नयाँ शक्तिको अस्तित्व होइन, अब पुराना दलहरुको अस्तित्वचाहिँ संकटमा पर्छ ।
तपाई नयाँ शक्तिमा प्रवेश गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा बढी नकारात्मक टिप्पणी भएको देखिन्छ, यसलाई कसरी दिनुभएको छ ?
कसैबाट प्रतिकृया आउने भनेको विगत र वर्तमानलाई हेरेर हो । भविष्यलाई हेरेर प्रतिकृया आउँदैनन् । अहिले मैले सुन्ने मात्र हो । यसलाई राम्रो पनि मानेको छैन, नराम्रो पनि मानेको छैन । धेरै जनाले गाली गर्नुभएको छ, चित्त दुखाउनुभएको छ भन्ने सुनेको छु । समाजमा धेरै खाले मान्छे हुन्छन् कोही आरीस गर्ने हुन्छन् । म जानेर कहील्यै नराम्रो काम गर्दीन नराम्रो काम गर्नेलाई छोड्दीन पनी त्यसैले म कुनै टीप्पणीको प्रवाह गर्दीन ।
तपाईमा अलि अस्थिरता देखिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । तपाईका पछिल्ला गतिविधिले पनि त्यस्तै देखाउँछ हैन ?
म कसरी अस्थीर ? मैले थालेको सबैकाम पुरा गरेको छु । जिम्मेवारी पुर्ण रूपमा सफल पारेको छु । समय र देशको माग नयाँ शक्ति हो म यसमा प्रवेश गरे के म अस्थीर भए ?
कहिलेसम्म नयाँ शक्तिले नेपालको राज्यसत्तामा पहुँच र्पुयाउला, तपाईलाई के लाग्छ ?०७५ मंसिर सम्म निर्वाचन हुनुपर्ने नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको छ । त्यो निर्वाचनमा नयाँ शक्ति सरकारमा पुग्नेगरी वा सरकारको नीतिलाई प्रभावमा राख्दै आम जनताका हकहितका लागी सेवामुखी भएर अघि बड्नु पर्छ ।प्रस्तुति : किसोर श्रेष्ठ Celebrities Event